Khataraha iyo Khataraha kiniiniyada hurdada: Waa in loo akhriyaa Kuwa aan Habboonayn
Waxaa laga yaabaa 1, 2021 2021-05-01 11:41
Xilliga cusub ee dhexdhexaadinta hurdo la'aanta, zaleplon (Sonata), cudurka zolpidem (Ambien), Eszopiclone (Lunesta), Iyo zopiclone (Imovane), ama daweynta daroogada, waxay ku dhaqmaan hoos-u-dhigis sax ah oo ku jira soo-dhoweynta GABA. Caadi ahaan waxaa loo aqoonsaday inay yihiin daawooyin, laakiin magacaasi waa khaldan yahay, sababtoo ah wuxuu ku biirayaa isla Gamma aminobutyric acid-benzodiazepine receptor oo ku dhex murugsan maskaxda. clonazepam iyo godka aalkolada in. Farqiga dhabta ahi waa sababta oo ah xaalad deg-deg ah oo lagu beddelan karo isku-dhafka isku midka ah ee isku-dhafan. Waxaa loo suuq geeyay inay leeyihiin qadar yar oo caado ah iyo waxyeelo aan badnayn oo aan loo baahnayn marka loo eego waayeelka daawooyinka benzodiazepine, iyo doodo dhowr ah oo ku saabsan in daawooyinkan ay leeyihiin awood yar oo xadgudub ah marka loo eego diazepam.
Si kastaba ha noqotee, cilmi baarayaashu ma aysan tusin kuwa qalloocan inay ka waxtar badan yihiin ama ka ammaan iyo cod badan yihiin kuwa loo yaqaan 'benzodiazepines', halka ay qiimeeyaan dhowr jeer oo dheeri ah. Sida sawir ahaan, isu ururinta xogta laga soo qaaday dhowr shaybaar oo ay ugu badnaan tahay 96 qof ayaan soo bandhigin farqi u dhexeeya diazepam iyo zopiclone si ay u seexdaan, halka benzodiazepine uu lahadlay bukaanada nasasiiyay 23 unug oo la kordhiyay. Markii hore ma jirin kala duwanaansho u dhexeeya diazepam iyo zopiclone dhibaatooyinka asaasiga ah ee aan loo baahnayn (munaasabadaha xun). Iyadoo aan wax farqi ah u dhexeynin Z badan. daaweynta daroogada ee amniga ama qaar badan ayaa sii dhismaya. Saamaynta caadiga ah ee aan loo baahnayn sida dawooyinkan dhakhtarku qoro waxaa ku jira xusuusnaan la'aanta, lulmo, xanuun, madax-xanuun, caajisnimo, iyo walwal iyo walaac. Ma jiro ilaa iyo hadda wax macluumaad ah oo ku saabsan suurtagalnimada baahida loo qabo Z. Daawooyinka ayaa ka hooseeya fasallada waxbarashada ee hore ee dhibaatooyinka hurdo la'aanta daawooyinka loo qoro sida benzodiazepines.
Marka waa kuwee daawooyinka Z ee sida ugu fiican u shaqeeya? Qiimeyn dhowaan la heli karo iyada oo loo marayo Hindisaha Qaranka ee Bilaashka ah ee loogu talagalay Cadeynta Caafimaadka Gaarka ah (Wonderful) ee 2004 ayaa cadeeyay inaysan jirin wax farqi ah oo u dhexeeya daroogooyinka dhakhtarku qoro ee badan (Sonata, Lunesta, Ambien, ama Imovane) ee waxtarka leh, naafanimada habeenkii, ama fursada fallaadhayaasha ama kalsoonida. Intaas waxaa sii dheer, ma jirin wax faa iido ah oo ku saabsan waxtarka ama saameynta xun marka la barbar dhigo diazepam. Lixdan daqiiqo Sonata waxay soo bandhigeysaa qaab nololeed aad u yar oo ka yar Ambien (2.5 waqti dheer) iyo Lunesta (6 saacadood), waana natiijada la siiyay inay la xiriirto subaxnimo daal yar. Lunesta waa daabacaad 100% daahir ah isla gurigaas hooyadaas ama aabbaha zopiclone, waxaana loogu talagalay inay tahay xayeysiin iyo dadaal suuqgeyn ah oo looga baxo xayeysiinta aan wanaagsaneyn ee lala xiriiriyay daraasadaha sayniska ee zopiclone (oo la sameeyay kahor inta ugu badan - ilaa taariikhda Z daawooyinka ayaa la bilaabay) oo muujinaya kororka dhacdooyinka booqdayaasha oo muujinaya adeegsiga. Ilaa ugu dambeyntii cilmi baaris lagu sameeyo si gaar ah si loo saxo caqabadda, waa inaan aaminsanahay dhammaan Z. daroogada ayaa ugu dambeyntii loo arki doonaa inay kuxirantahay wanaajinta wadista shilalka baabuurta.
Mid ka mid ah waxyeelooyin kale oo cabsi leh oo suurtagal ah oo lagu arkay bukaanada qaadaya Ambien ayaa ah hurdo-socod. Ambien wuxuu si tartiib tartiib ah kor ugu qaadayaa suuxdinta, taas oo la xiriirta socodka socodka. Markay ahayd 03 8, 2006 Kii ugu cusbaa Waxaad awoodi kartaa inaad tusaale u qortay dhowr xaaladood oo shakhsiyaad istaagaya, ku wareegaya guriga, diyaarinaya cunto, iyo laga yaabee inay baabuur wataan. Xaaladaha dadka ka soo degay sariirta isla markii ay yeesheen Ambien (mararka qaarkood iyagoo isticmaalaya vino ama labo), wadista, iyo helitaanka shilalka baabuurta, iyada oo aan si fudud loo keydin alaabtii dhacday, ayaa sidoo kale lagu sharaxay. Dadka qaar ayaa soo toosay saq dhexe iyagoo gawaaridooda ku jiirsiiyay gawaarida taagan, ka dibna ku tijaabiyay safarka maqnaanshaha, ugu dambeyntiina xusuus kama yeelan wixii dhacay (Xusuusnow Taangihii Kennedy?).
1 nin oo isticmaalaya duulimaadka trans-Ocean airline ayaa Ambien ku qaatay laba qaybood oo khamri ah. Hurdadooda, wuxuu hoos u dhigay labiskiisii ​​iyo ammaan darradiisa si uu uga takhaluso naftooda iyo kuwa kale. Natiijo ahaan, diyaaraddu waxay u baahnayd inay samayso dhammaad muhiim ah. Meel xusuus ah kuma lahan dhacdada xun.
Qaddar kasta oo booze ah, sidoo kale galaas khamri ah, ayaa si weyn kor ugu qaadaya suurtagalnimadaada inaad isticmaasho shil baabuur oo hurdo hurdo leh oo khatar ah. Sidoo kale, seexashada ayaa sidoo kale loo dalbaday Ambien badanaa sababta oo ah waxay haysaa 85% qaybta dawada hurdo la'aanta. Aad ayey macquul u tahay in daawooyinka kale ee hurdo la'aanta ay sababi karaan isla dhibaatada isla.
Waxaad ka heli kartaa mid ka mid ah daawooyinkan fudud inay kuu joogaan si ay kuugu soo maraan meel qalalan oo dhibaatooyin xagga hurdada ah. Laakiin haddii aad leedahay cilladaha hurdada ee joogtada ah daaweynta dabeecadda garashada ayaa aad uga fiicnaan doonta daawooyinka, iyo adigoon yeelan waxyeelooyinka aan loo baahnayn!